Oovimba abagcina iindawo ezigcina umhlaba | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » I-Tag Archives: Baselight
Archives Tag: I-Basiclight
Ukunyanzeliswa kokukhanya kuphehlelela iCrourSpace CMS
Inkqubo entsha yoLawulo lweMibala iColourSpace iyafumaneka ngoku uku-oda kwangaphambili kunye noVavanyo lweBeta lokuKhutshwa kwangoko-eLondon, nge-29 ku-Epreli 2020-UkuKhanya okuKhanyayo, ingcali kulawulo lwemibala ebalulekileyo ngaphakathi kwifilimu, kwimveliso yangemva kwemveliso, nakwimizi-mveliso yosasazo. Imveliso entsha yolawulo lwemibala ebizwa ngokuba yi "ColourSpace CMS". Okwangoku iyafumaneka kulungelelwaniso lwangaphambi kwexesha, elenza ukuba lithathe inxaxheba ...
Abaphumeleleyo boMnyhadala wefilimu waseBerlin bagqibe ngeBaselight
Akukho Bubi kunye nokuCinywa kwabaphumeleleyo beMbali abagqityiweyo kubuGcisa beOptical eJamani kunye noMbala eParis LONDON-15 ku-Epreli 2020: Kwi-70th Berlinale, kwi-2020 Berlin Festival, iGolden Bear yaphumelela ngu-Akukho bubi, ikhokelwa ngu-Mohammed Rasoulof; Ibhaso elikhethekileyo leSilver Bear liye kucinywe iMbali, likhokelwa ngu ...
Amaqela e-FilmLight aphakama kunye ne-ARRI kuluntu lokuyila eParis
Usuku lokuqala lweMibala ka-2020 olusingathwe eParis nge-28 kaJanuwari LONDON - 23 Januwari 2020: Emva kokuqeshwa kukaMatthieu Straub njengomcebisi wenkampani kwezobuchwephesha kunye nokusebenza eFrance nakumazwe aseBenelux ngehlobo lowama-2019, iFilightLight iyavuya ukwazisa ukuba ngoku iseke ubukho ngokusisigxina eParis. Ngokwabelana indawo ...
I-Baselight iyanceda ekupoliseni ii-Gems Uncut
I-LONDON -I-14 kaJanuwari ngo-2020: Iintsomi ezingafakwanga yeyona bhanyabhanya yakutshanje evela kubakhokeli be-duo, i-Safdie Brothers. Umdlalo bhanyabhanya ubalisa ibali lobugcisa beNew York City kunye nomntu ongcakazayo (uAdam Sandler), kwaye usetezwe kumzi-mveliso wedayimane yaseNew York. Ke kufanelekile ukuba ipalale yombala yenziwe kwi-Mill NY nge-colourist ...
I-Technicolor isebenzisa iBasilight ukudala ukukhanya kunye nomthunzi kwizixhobo zakhe zobumnyama
Colourist uJean-Clément Soret udibanisa i-CGI kunye nokudubula kwasemoyeni LONDON-18 ngo-Disemba 2019: Olunye loludwe lweedrama olwalulindelwe kakhulu lwe-2019, Izinto zakhe eziMnyama, eziveliswe ngu-Bad Wolf we-BBC kunye ne-HBO, zagqitywa eTechnicolor eLondon. Ngebali elibekwe kwindalo efanayo ebonakala ngathi yiBritane yenkulungwane eyadlulayo, kwaye ...
Amandla e-Baselight X kwisiboniso sentliziyo ye-Inter BEE
U-Yoko Kimura ujoyine ukuthengisa phambili kunye nentengiso kwingingqi LONDON-29 Okthobha 2019: IFilimuLight kukubonisa imeko yobugcisa kumbala woyilo kunye nokuhamba okusebenzayo kwemveliso kunye neposi kwindawo yayo kwi-Inter BEE 2019 (13-15 Novemba, Makuhari Messe , yima 6111). Kwi-Inter BEE, ubukho be-FilmLight buya kukhokelwa ngu-Koichi ...
Ishumi elinesihlanu longeze i-Baselight grading suite yesibini
U-colourist onamava wexesha elide, u-Joe Stabb, ukutyhala imida ye-4K kunye ne-HDR yokuhambisa i-LONDON-21 Okthobha 2019: Ukukhokela i-boutique yase-London kwindlu yendlu engamashumi amahlanu anesihlanu yongeze i-suite yesibini yokubeka iBaselight njengenxalenye yenkqubo yokwandisa. Ngomdla okhulayo kumxholo wokugqibela osasazo kunye nokusasaza, zombini iisuti zixhotyiselwe i4K kunye neHDR ...